40T Caadiga alxanka rotator - Shiinaha Wuxi Success Makiinado
Is simaya Rotator
caadiga ah Rotator
Xir ilaa alxanka Rotator
Koraaya System Line
positioner laabto Gear
3 dhidibka posiitoner Haydarooliga
Head & stock dabada positioner
Dhererka qabsato positioner
3000kg 3 dhidibka positioner Haydarooliga
10T Horizontal ujawaab
ilaa 100T xir alxanka Rotator
60T Caadiga alxanka rotator
40T Caadiga alxanka rotator
awoodda Load - Calan: 40 metrik ugu badnaan
awoodda Load - Wadi: 20 metrik ugu badnaan
awoodda Load - Idler: 20 metrik ugu badnaan
awoodda wareegga: 40 metrik ugu badnaan
Weelasha dhexroor: Min.500mm ~ Max.4800mm
xawaaraha wareegga: 100 ~ 1000mm / min VFD
xoogga wareegga: 2 * 1.5kw la qaboojinta taageere
giraangiraha rullaluistemadka: PU (giraangiraha polyurethane)
nidaamka Control: control gacanta Remote & baydalka Foot
Danab: 110V ~ 575V oo dhan la heli karo.
Waqti Delivery: At stock
: FOB Price . 6, 00 *** USD
Control System & Xidhmada
The Rtators tuuboyinka alxanka Caadiga qabsato kartaa masaafada dhexe by godad fur rights reserved ama fur hogaanka si ay u qabsadaan si ballaciisu yahay ee shaqada rotators piece.Conventional la geeyn karaa awood ka 5,000 kg ilaa 1000 tonnes.It awoodo gacanta si wadajir ah ula qalab kale sida manipulator alxanka, mashiinka alxanka, mashiinka alxanka nooca u eegis iyo wixii la mid ah.
Halkan Hoos waxaa ku Lead 30T Ku marooji Alxanka tuuboyinka Rollers faahfaahinta:
awoodda Load - Drive 20 metrik ugu badnaan
awoodda Load - Idler 20tons ugu badnaan
awoodda Load - Calan 40 metrik ugu badnaan
awoodda wareegga 40 metrik ugu badnaan
weelasha dhexroor Min. 500mm ~ Max.4800mm
xawaaraha wareegga 100 ~ 1000 mm / min VFD
xoogga wareegga 2 * 1.5kw la qaboojinta taageere
giraangiraha rullaluistemadka PU (giraangiraha polyurethane)
jidka Control control gacanta Remote + baydalka Foot
danab Input 110V ~ 575V Single / 3 Phase 50 / 60Hz
Certificate ansixinta CE
Alxanka hagaajin jeestay Roll / tuuboyinka alxanka Rotators Description:
1. Mid ka mid ah drive rullaluistemadka gabal & mid ka mid rullaluistemadka gabal idler waa la isku soo baakadeeyey sida mid ka mid ah set for sale.
2. gacanta gacanta Remote, Radio gacanta gacanta & Foot gacanta baydalka jira oo dhan avaialble.
3.Lead Ku marooji qabsiga waayo, weelasha dhexroor kala duwan via qabsado buugan.
4. Top-fasalka qaybaha electronic ka Schneider si loo hubiyo in waqtiga dheer la isticmaalayo nolosha.
5. 100% cusub ee ka soo saaraha asalka ah -. WUXI GUUSHA mishiino CO QALABKA, LTD.
6. Haddii dhererka biibiile hal ka badan 8 mitir, waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad ka dooro mid rullaluistemadka drive iyo laba rollers idler si ay u taageeraan.
1. safarka Gaadhi rotator alxanka biibiile caadiga ah waxaa lagu cilmi-baaris, loogu talagalay oo soo saaray ahmiyadda qalab horumarsan gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
2. Noocaan taangiga caadiga jeestay duub oo inta badan loo isticmaalo biibiile weyn, weel, kululeeyaha, iyo weelashii cadaadis, taangiga saliidda, munaaraddii dabaysha oo kale alxanka shirka dhululubada, beera-engeeg iyo rinjiyeynta.
3. Gaadhi hogaanka socdaalka rotator alxanka fur assort kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee alxanka auto ama alxanka buugan, hagaajinta tayada alxanka, yaraynta shaqada iyo horumarinta wax soo saarka.
4.Depends on codsiga kala duwan, dusha isaguu ku leedahay saddex nooc, PU / caag / giraangir bir.
Alxanka Haanta jeestay Rolls From Faa'iidooyinka Wuxi Success:
1. Dhammaan biibiile rotators leexdo inverter waa ka Danfoss.
2. our taangiga alxanka rollers jeestay motor Dhammaan waxay ka ahaadeen Invertek.
3. Dhammaan duub alxanka biibiile qaybaha our elektaroonik ah waxaa laga Schneider.
shahaadooyinka 4.CE suuqa iyo CO shahaadooyinka Yurub la rotators alxanka suuqa Bariga Dhexe.
Weelasha Cadaadis tuuboyinka Alxanka jeestay Isticmaalka Roll:
1. taxane kala duwan oo dhexdhexaad ah ayaa danbeeyay for qaabkaaga ee wax ku ool ah cylindrical dheer shaqo-xabbadood.
taangiyada 2. Oil, weelasha cadaadiska, iyo biibiile waa codsiyada in ka faa'iidaysan duub jeestay.
3. waxyaabaha Long aan cylindrical la waafajiyaa laga yaabaa in la gargaarka ee loogu talagalay caadadii siddo taageero.
4. design Waxaan daro cajaladood oo dollar on wheel kasta in looga hortago xamuulka xad-dhaaf ah ka dhaawac taayirada.
Su'aalo More Macaamiisha laga yaabaa in ay khusayso Wuxi Success:
Q 1aad: Maxaa ku saabsan transportion ah?
A: 1. Si buuxda u soo baakadeeyey ee kiiska alwaax dhaawac anti inta lagu guda jiro geeddi-socodka transportational.
2. Sida caadiga ah aan ku qaadan seaway, ka dhigi ay sahlan oo jaban mashiinka weyn.
3. Door adeeg bixinta albaabka sidoo kale waa la heli karaa.
Q 2: Waa maxay damaanad iyo ka dib markii adeeg sale?
A: 1. Dhammaan qalabka our waqti damaanad Hal Sano ah, si buuxda baaritaanka dukaan shaqadayada ka hor dhalmada.
2. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan rakibo, waxaad ka heli doontaa injineerada our jawaabaan 24 saacadood gudahood.
Q3: aad mishiinka ama waxyaabaha kale ee laga beddeli karaa?
A: Haa, Annagu waxaannu nahay saaraha xirfadle ku takhasusay qalabka alxanka oo ku saabsan 15 sano. Waxaan heysanaa koox xoog badan design inay buuxiyaan shuruudaha macaamiisha.
Q4. Control Hab-Tayada:
A: mashiinada oo dhan waxaa lagu sameeyey jirrabaya hor shixnad. A shaqada maxkamadda 30min waxaa toogasho ah in la damaanad qaado mashiinka noqon meella.
Previous: 30T Caadiga alxanka rotator
Next: 60T Caadiga alxanka rotator
All Ku marooji Alxanka Rotator Control System Lead:
1. Our alxanka Caadiga Rollers jeestay jira oo dhan la Heerka sanduuqa gacanta gacanta fog iyo gacanta baydalka cagta.
2. Wireless gacanta / raadiyaha gacanta waxaa laga heli karaa, laakiin sida caadiga ah, waayo, waxaa waajib culus iyo biibiile / taangiyada dheer.
1. Haddii si hal / laba nooc rollers biibiile, ka dibna waxaan ku dari doona ay dhacdo in alwaax ee maraakiibta LCL, iyo sidoo faahfaahinta rakibo.
2. Haddii alxanka rollers jeestay dalban tiro ku filan hal weelasha oo dhan, waxaan santuuq doonaa weel si toos ah.
1. shirkadda Our (Wuxi Success Makiinado & Qalabka CO., LTD) ayaa laga dhoofiyey alxanka jeestay rotators in ka badan 30 dal oo adduunka ah. stock Yurub & America waxaa laga heli karaa.
2. Halkan hoose qaar ka mid ah rollers alxanka biibiile sawiro ka shaqeeya oo dhan waa ka our macaamiisha warcelin goobta shaqada.
Mexico 30T L EAD Ku marooji Caadiga Alxanka Rollers.
ITALY 40T iyo 60T Bolt qabsiga Tube Alxanka Rotators la giraangiraha PU.
America 100T Bolt qabsiga CONVENTIONAL- biibiile alxanka iyo leexashada ROLLERS SHAQAYNTA weelal CULUS.
30T Caadiga alxanka rotator
10T Caadiga alxanka rotator
200T rotator alxanka Caadiga ah
5T Caadiga Alxanka Rotator
500T rotator alxanka Caadiga ah